Neeta Foundation - मेरो छोरीको झुम्का
Friday, 18 March 2016 04:51
मेरो छोरीको झुम्का
Written by Neeta Foundation
बिहानको पारिलो घाम,पसिनाको १ थोपा नाकको डिलमा झोलुङ्गो खेल्दैछ । जडौली फरियाको फाटेको एक फेरोले,पोतेँ पसिना मुखभरी अनि फेरेँ लामो सास । तेस्तै सास जुन अरुले फेर्ने गर्छन...फरक यती हो उनीहरुको सासमा मन्जन बास्ना आउछ अनि मेरो सासमा बिर्ता स्विट्स एन्ड होटलले हरेक रात फ्याक्ने बासी समोसा । बढ्दो गर्मीले लट्टा परेका कपाल चिल्चिलाउछन् अनि म दशै औंलाले टाउको कन्याउछँु । बढेका नङ भित्रै जुम्रा अड्किएर आउछन्...निकालेर नङले थिचेर मार्छु । पिटिक्क पिटिक्क गर्छन्..आनन्द बेग्लै आँउछ । म दाहिने हातले कन्पट्टी चिलाउदै खाना पाकेको हेर्दैछँु । त्यो ठूलो भाडोबाट निस्किएको हरएक बाफले मेरो आन्द्रा दोबार्दै लान्छ । सुख्खा घाँटीले घुटुक्क थुक निल्छ अनि भोको पेट क्याउ क्याउ गर्छ । भित्रबाट एउटा कराउदै निस्किन्छ “भाक् रे पागल्नी,मारु डन्डा ।” ३ बर्षकी मेरी अर्धनग्न छोरी च्यापेर, म पर्खालको एक कुनामा बसेर कुर्छु,त्यो एक टपरी पुलाउ जस्ले मेरो भोकलाइ पेट भित्रै थिच्नेछ ।
ठूलो स्वरले बजेको गानाले मन्त्र पढ्ने पन्डितको ओठ चलेको मात्र देखिन्छ । बेहुला बेहुली ज्ञानी बच्चा जस्तै बाजेले भनेको खरखर मान्दैछन् । फोटो खिच्ने मान्छे क्यामेराले आफ्नो अनुहार छोपेर दुँनियाको अनुहार निकाल्दैछ । गला अनि कानमा सम्पन्नता लटरम्मै फलेको छ । लुगाहरु को भन्दा को कम सरी जिउमा टाँगिएका छन् । सजाएर राखिएको खानाले मेरो मन भताभुङ्ग छ । छेउमा उभिएर दाँत कोट्याइ रहेका मान्छेहरुले मेरो भोक कोट्याउदैछन् । यस्तै छ दुँनिया...कतै भोक त कतै भतेर ।
पानी खाएर फालिएको प्लास्टिकको ग्लास संग खेलिरहेकी मेरी छोरीलाइ हेर्छु । उस्को अबोध हातलाइ के थाहा त्यो जुठो हो भनेर । भिडमा सजिएका बच्चीहरु संग आँखा मिलाउनु पर्दा म मेरी बच्चीलाइ अन्याय गर्ने आमा प्रमाणित हुन्छु । त्यो नाङ्गो जिउ जस्लाइ ढाक्दिनको लागी कैयन दैलाहरुमा मैले हात फिजाउनु पर्छ । त्यो नाङ्गो खुट्टा जस्लाइ छोप्नको लागी फोहोरका थुप्रामा बिजोरी जुत्ताहरु खोज्नु पर्ने हुन्छ । त्यो भोको पेट जस्लाइ भर्नको लागी ताजा खाना बासी हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो बच्चीलाइ के थाहा ल्याक्टोजिन र हर्लिक्सको स्वाद के हो । त्यो बच्चीलाइ के थाहा पिलपिल बल्ने जुत्ताको स्पर्श के हो । उस्ले त मात्र रुन जानेकी छे । उस्को हरएक रुवाइलाइ शान्त पार्न म मेरो न्याम्टो चुसाउनछँु । दुधको धारा बग्नु पर्ने तर मेरो बच्ची थोपामै चित्त बुझाउछे । बढ्दो उमेर संगै उस्लाइ फोहोरले तान्नेछ । उस्ले पनि नगरपालिकाको गाडी आउनु अगाबै आफ्नो पुरा दिन टिपी सिध्याउनुपर्नेछ । उस्ले कपी कलम छुन पाउनेछैन । शहरको गल्लीहरुमा नसामा मातिएका अपराधीहरुबाट बलात्कृत हुनु पर्नेछ । अनि मैले जस्तै गरी एउटा जिवनलाइ जन्म दिनुपर्नेछ । उस्को पनि बिहे हुनेछैन तर आमा बन्नु पर्नेछ । उस्को पनि बिदाइ हुनेछैन तर हरएक दिन रुनु पर्नेछ । मेरी बच्ची बेहुली बन्ने छैन तर सुहाग बिनाको रात मनाउनु पर्नेछ । मेरी बच्चीले पनि म बन्नु पर्नेछ ।
बिहेको माहोलमा सबै मस्त देखिन्छन् । मेरो छोरी नजिक अर्की सानो बच्ची खेल्दै गरेको देख्छँु । फोहोरी हातले त्यो बच्चीको कानमा छुन्छे,आफ्नो कानमा हात लाउछे अनि रित्तो कान समाउदै म तिर हेर्छे । उस्को हेराइले मलाइ प्रस्ट सोध्दैथियो...मेरो कान बुच्चै किन ? म तेस्को हेराइलाइ कसरी सम्झाउ,गरिबीको कोखमा सुनको कुनै सम्बन्ध हुदैन । तर पनि त्यो हेराइले घाम भन्दा बढ्ता पोल्यो मलाइ । मैले आफैलाइ सेलाउनको लागी,त्यो बच्चीको कानबाट झुम्का लुछेँ.....छोरी बोके अनि नदेखिने गरि बाहिर निस्किए । हो मैले गलत गरेँ....मेरो बच्चीको चाहना पुरा हुनुनै अपराध हो । तेस्लाइ रुने अधिकार दिएको समाजमा,हाँसो तेस्को अपराध नै हो ।
केही छिन पछि हल्ला चल्छ । म गेट बाहिर नालाको डिलमा गालामा हात राखेर बसेको छँु । केही नजरहरु म प्रति संखालु देखिन्छन् । मान्छेहरु आफ्नो दिमागले भ्याए सम्म अड्कल बाजी काट्दैछन् । एउटी महिला बच्ची बोकेर कराउदै छे....मेरो छोरीको झुम्का हरायो, मेरो छोरीको झुम्का हरायो । म मनमनै भन्दैछँु......तेरो छोरीको झुम्का हराउदा यत्रो हल्ला, मेरो छोरीको त खुसी हरायो...म कराए भने सब्को जाली फुट्छ ।
Read 1828 times	Last modified on Friday, 18 March 2016 05:10
Latest from Neeta Foundation
The 33 International AIDS
Motivation Training at MUKTI by Dr. Deepak Sakya Sir
BIJAM Saath-Saath Project team conducted one day S&D training with MUKTI.
Short motivational interaction and fruits distribution program
More in this category: « बिरामी	पिच्कारी »
Copyright © 2020 Neeta Foundation. All Rights Reserved.